Homo ergaster: njirimara, mmalite na omume | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime nna nna nke mmadụ anyị nwere Homo nwoke. Ọ bụ hominid pụtara na kọntinent Africa ihe dị ka afọ 2 gara aga. Kemgbe a chọpụtara ozu mmadụ ndị a, e nweela nnukwu esemokwu n’etiti ndị ọkachamara. Considerfọdụ na-atụle na ụdị a yana Homo erectus ha bụ otu ụdị, ebe ndị ọkachamara ndị ọzọ na-ekwu na ha bụ ụdị dị iche iche.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite na ịmata ihe nke Homo nwoke.
2 Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na oke ala Homo ergaster
3 Njirimara anụ ahụ nke Homo ergaster
Ihe omuma nke gbasoro taa bu na udi mmadu a bu nna nna ya Homo erectus. Ọ na-ewere dị ka mbu hominid nke nwere ike ịhapụ mpaghara Afrika. Ọdịdị ahụ nke ụdị a nwere na-anọchite anya nnabata evolushọn karịa ụdị ndị ọzọ gara aga. N'ụzọ dị otú a, anyị na-egosi ịdị elu nke nwere ike iru gburugburu 1.8 mita. Dika umu anumanu ndi ozo, nke a puru iche karia inwe ikike nke mmadu. O nwere ikike a karie nke ndị nna nna ya. N'ihi nke a, ọtụtụ ndị ode akwụkwọ na-eche na nrị elu nke anụ na-akọwa mmụba na ikike cranial a.
Atụgharịrị, Homo nwoke pụtara nwoke na-arụ ọrụ. Speciesdị a wetara ya nnukwu mmụba nke ịkọwapụta ngwá ọrụ na arịa ya malitere ịdị mgbagwoju anya. Site n'inwe arịa ndị a ka mma, ọ ga-ekwe omume ịkwado usoro ịchụ nta na ọrụ ndị ọzọ metụtara ọha.
Ihe omumu nke emere na hominid a putara na ndi okacha amara nwekwara ike itule ya dika onye nochiri anya ya Homo habilis. N'akụkụ aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị ode akwụkwọ ekwenyeghị na nke a ma ọ nweghị nkwenye zuru oke. E nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta banyere ihe ndị ọzọ na-eche na ọ ga-abụrịrị otu ụdị. Oge mbu nke otutu okpokoro isi nke nwanyi bu nke ihe dika nde 1.75.
Otu n’ime ihe ndị kacha pụta ìhè n’afọ a bụ n’afọ 1984. E gwupụtatụrụ ọkpụkpụ nwatakịrị dị afọ iri na otu nke mere ka o kwe omume ịmụ banyere otú o si arụ ọrụ. Otu n'ime atụmatụ ndị kachasị pụta ìhè bụ ogologo ya. O toro ogologo na ọkara mita 11 n 'ụbọchị ọ nwụrụ, ya mere o nwere ike ruru mita 1.8. Ike okpokoro isi dị ihe dị ka cubic 880 cubic centimeters na ahụ ya nwere ọdịdị nke ọkpụkpụ niile nke yiri nke mmadụ ugbu a.
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na obodo metụtara nke Homo nwoke
Nke a na hominid àgwà n'oge Middle Pleistocene epoch ihe dị ka nde 1.9 afọ gara aga. Nkwụnye ego a chọtara na-ekpughe na ebe obibi ha ebe ụbọchị na ndụ malitere bụ na Etiopia, Tanzania, Kenya na Eritrea. N’ebe niile a, ihu igwe dị na mmiri na-ezo oge ọkọchị ọkọchị werekwa ihe dị ka otu narị puku afọ.
Fọdụ ndị ọkachamara kwenyere na Homo nwoke ọ bụ mbụ hominid nwere ike ịhapụ mpaghara Afrika. N'ihi mbugharị a, ọ nwere ike imeghari na mpaghara ndị ọzọ nke ụwa ebe ndị ọzọ na-ahụkarị ihu igwe, ahịhịa na anụmanụ. Tupu ịhapụ mpaghara Afrika, ọ gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ nke mpaghara a, na-eme ka ọpụpụ ahụ na Middle East Asia n'etiti ihe dịka 1.8 na 1.4 nde afọ gara aga. A maara na ọ bịara weghara mpaghara nke Caucasus. A chọtala ụfọdụ ihe ndị nwụrụ anwụ na Spain na fromtali site n'ihe dị ka nde afọ 1.4 gara aga.
E nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwenye na ọ ngwa ngwa nyere ụzọ Homo erectus dị ka onye buuru ya ụzọ. Fọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na ha bụ otu ụdị nke dịgasị na mpaghara ha. N'ọgbọ mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị na-ahụ ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa na-adabere na gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na ụdị dị iche iche amalite na gburugburu ebe dị iche o yikarịrị ka ọ ga-azụlite ụdị mgbanwe evolushọn ndị ọzọ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ụdị ahụ dị iche, kama na ọ na-agbanwe site na usoro ọzọ nke mmegharị.
Nkịtị mara nke Homo nwoke
Ka anyi lee ihe bu njiri mara mmadu nke a. Okpokoro isi ya nwere visor na-enweghị atụ. Mpaghara anya nku pere mpe karịa nke ndị nna nna ochie, ọ bụ ezie na ọ pekarịrị nke mmadụ ugbu a. The arọ na oscillated bụ n'etiti 52 na 68 n'arọ na ha kpamkpam biped. Legskwụ ya elongated na e nweghị ihe àmà nke akara mmekọahụ dimorphism. Nke a na-akọwa na enweghị ọdịiche anatomical dị n'etiti ndị nwoke na ndị nwanyị. N'etiti ha, ha nwere ike ịrụ ọrụ otu ọrụ n'agbanyeghị nwoke na nwanyị.
E gosipụtara ọdịdị ihu site na imi na-apụ apụ na agba na ezé pere mpe karịa nke Homo habilis. Mgbanwe nke nri na-eme ka ụbụrụ na-eto eto, obi ya dị warara n'ubu ya, ebe ọkpụkpụ apata ụkwụ ya dịkwa ogologo.
Akụkụ anụ ahụ ndị ọzọ mepụtara mgbanwe dị mkpa n'ụzọ na-achịkwa ọnọdụ dị n'ime ya. Ma ọ bụ na ọ nwere ike ịmalite ọsụsọ wee mee ka ntutu isi ya ghara ịdị ogologo oge. Isi ntutu pụtara na ngụgụ mepụtara n'ihu. Ekwesiri iburu n'uche na onye a na-ebuwanye ibu nke ime ihe ndi ozo di mgbagwoju anya, ya mere ọ dị mkpa karịa ume na ikuku oxygen iji nwee ike iburu ha.
Iku ume kwụsịrị ịbụ naanị ọnụ wee malite iku ume site na imi. Nke a bụ otú ha si nwee ike ịlanarị na savannah mepere emepe ebe mmụba dịwanye mkpa dị mkpa iji gbanahụ ndị na-eri anụ ma chụọ anụ oriri ha.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ekwu na n'etiti omume nke Homo nwoke odighizi eji osisi emeghari. Nke a bụ otú o si nwee ike ịhapụ ọnọdụ arboreal nke ọtụtụ ndị nna nna ya wee biri naanị na ala. Ha na emezi hominid nke ha na anatomi ha ka o diri gburugburu ha biri. Ibi na savannah, o dighi nnoo nke oma isi na osisi puo. Ha gara n'ụzọ yiri nke mmadụ ugbu a.
Ọ bụrụ na anyị agaa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha guzobere mmekọrịta siri ike na obodo. Asụsụ ọnụ pụtara n'agbanyeghị na ọbụghị ndị sayensị niile kwenyere na nke a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere Homo nwoke na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Homo nwoke